Sombintsombim-baovao | NewsMada
Par Taratra sur 23/05/2020
Mangataka fanohanana ihany koa ireo federasiona. Manoloana ny tsy fahafahana mikarakara hetsika ara-panatanjahantena sy ny fepetra fihibohana, miantso ny fitondrana mba hijery sy hanohana azy ireny, ireo mpitantana federasiona ara-panatanjahantena misy eto amintsika. Tao anatin’ny andro vitsivitsy mifandimby mandefa karazana antso sy hafatra eny anivon’ireny seraseram-pifandraisana ireny izy ireo, miangavy mihitsy ny hijerena ny mpanao fanatanjahantena, izay mahatsapa fahasahiranana ihany koa ao anatin’izao toe-javatra mitranga eto amin’ny firenena sy maneran-tany izao. “Niandry ampitoniana izahay nandritra izay roa volana izay”, hoy izy ireto, saingy tsy mbola tafiditra tao anatin’ireo nahazo fanampiana aloha hatreto. “Izay no nahatonga anay hanao izao fitarainana izao.
Volley CAVB: Nivoitra tao anatin’ny fampitam-baovao navoakan’ny filohan’ny Kaonfederasiona afrikanina ny Volley Ball (CAVB), Dr. Amr Elwani, fa miezaka mikaroka zava-baovao mba tsy hahavery fotsiny ity taom-pilalaovana 2020 ity, ny mpitantana. Hisy araka izany ny fampiofanana amin’ny alalan’ny fifandraisan-davitra ho an’ny mpanazatra sy ny mpisehatra eo anivon’ny taranja volley ball. Nangataka ihany koa izy ny hanaovan’ireo firenena tsirairay tatitra hahafahana manaraka ny fivoaran’ity taranja ity.
Lalao Olympika: Nanamafy ny filohan’ny komity iraisampirenena olympika (CIO), i Thomas Bach, fa tsy azo eritreretina mihitsy ny hanemorana fanindroany ny lalao olympika izay efa nahemotra ho amin’ny taona 2021. Efa ezaka lehibe, hoy izy, ny ataon’ny CIO sy ny komity mpikarakara ao Japana, hahafahana manatanteraka an-tsakany sy an-davany ny fifaninanana amin’ny taona ho avy. Araka izany, foanana tanteraka ny lalao olympika 2021 raha toa ka tsy tontosa amin’ny daty efa napetraka.